galmada Archives - Page 16 of 17 - iftineducation.com
Waxa ay u eegtahay in wadanka England ay xaraarada raaxada sariirtu aad u badan tahay. Taas oo keenta dhaawacyo kala duwan oo ka soo gaadha lamaanaha hawsha u gaarka ah ku guda jira. Hadba arintan ayaa waxa baadhitaan ka soo sameeyay Phonepiggybank si loo ogaado dhaawaca soo gaadha lamaanaha marka ay raaxaysanayaan oo xaraaradoodu meel sare marayso iyo sida ay…
Qubarada arimaha qoyska ee xayaati.com ayaa tilmaamaya in heerka furiinka dalka Somaliya uu kordhay taasi oo keeneysa in dib loogu laabto wax yaabaha keenaya qilaafaadka qoyska , waxaa ka mid ah arimaha keena . 1- Dbacsanaan : waa caqbadda ugu horeeysa ee qaboowga ku keeneysa xariirka labada lamaane oo xaraarada ka qaadeysa , waxaa loo baahaan yahay in ihtimaamka uusan…
Badanaa Raggu waxey Jecelyihiin dumarka quruxda badan xaqiiqdii, taa macnaheedu ma aha inaad u ekaato sida hablaha xayaysiiska quruxdooda oo kale,laakin ahaw mid quruxdeeda dabiiciga ah difaacata,hadana waa inaad taqaanaa quruxdaada masaaxada ay la’eg tahay iyo sidaad uga faa’iideysan karto,adigoo aanan sharaftaada ku xadgudbeynin ama jirdhkaaga banaanka soo dhigeyn. Ku xisaabtan mar walba quruxdaadu waa hubkaaga,laakin ka fogow quruxda ka…
Rag badan ayaa ka sheegta biyaha durba soo booda marka ay sidaas ay malabyarowga u giliyaan xubinta haweenka taasi oo ku reebta cuqdad nafsiyan ah , inkastoo ay jiraan dawooyin la isticmaalo oo uu ugu caansan yahay kaniiniga Vega-ha la yiraahdo hadana waxa uu kugu reebayaa saameyn xoogan . Heegan24.net ayaa ku siineysa hab sahlan oo aan rajeyneyno in aad…
aadan21 / July 5, 2017
Gabar u Dhalatey dalka Holland ayaa waxaa la sheegay inay si xirfadeysan oo cajiib ah ay u soo qabatey oo ayna gacanta ugu soo dhigtay wiil Soomaali ah oo Qaxooti ah oo Faraxumeyn, Jirdil iyo dhac u geystey iyadoona ay gabadhaas ay Wiilkaas Soomaaliga ah ay Booliiska dalkaas ay u gacan galisay. HALKAN KA DAAWO VIDEO Gabadhaan oo aan…
Booliska magaalada Los Angeles ayaa xabsiga u taxaabay wiil reer boqor Sacuudi ah kaas oo lagu magacaabo Majed Abdulaziz Al-Saud kadib markii gabar gurigiisa ka shaqeyneysay uu ku khasbay in uu isticmaalo jirkeeda. 28-jirkaan ayaa markii hore ku eedeysnaa “kufsasho”, balse waxaa eedeyntaasi loo badalay in uu khasbay haweyneeydaasi si ay ula seexato. saudi prince jailed in los angels after…
Dumar badan oo inaga mid ahi waxay aad uga shaqeeyaan qurxinta wajiga iyo timaha, iyagoo ilowsan gacmahoodu inay yihiin quruxda iyo caafimaadka jidhka kuwa ugu sareeya, waxaa hubaala gabadha xijaaban quruxda jidhkeeda iyo caafimaadkiisa in laga qiyaaso gacmahooda. Cidiyaha oo la dhereeyo oo si qurux badan loo jaro kaliya maaha quruxda gacmaha, gacmaha oo xine (cilaan) la mariyo waa qurux…
DAAWO :- fakirkaada waa muhiim yaad doran laheed dumarka kunool qurbaha iyo dumarla kunool somaliya
sxb waa muhiib fakirkaada waxaa su aal ah yaad doran laheed gabdhaha kunoo wadamada shisheeyo macnaha qurba joogta ayaan ulajeydaa waxaa gabdhaha somaliyeed ama yaad doran laheeda gabdha kunoo wadan somaliya haddaba daawo muqzaalka gabdhaha somaliyeed DAAWO MUQAALKA RIIX DAAWO :- fakirkaada waa muhiim yaad doran laheed dumarka kunool qurbaha iyo dumarla kunool somaliya
Shabakada Arimaha Bulshada Bulsha ayaa dhawaan daaha ka rogtay Daraasad cusub oo ay qaaday taasoo shegeysa in gabdhaha Quruxda badan aad u jecel yihiin wiilasha kaftanka badan marka loo fiirsho wiilasha xirxiran. Gabdhaha ayaa lasheegay inay aad u jecel yihiin xilyada ay la kulmaan wiilasha kuwa keena qosolka, indhaha gabdhaha ayaa soo jiitaan qosolka iyo kaftanka, warbixinta ayaa sheegtay in…